Fikarohana momba ny firaisana Beto O'Rourke ho fampiofanana an'i Robert F. Kennedy: Ny fiainana taloha Talenta sy ny fijaliana - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Beto O'Rourke amin'ny maha-teraka indray ao amin'ny vatana vaovao an'i Kennedy
Ny olona iray izay liana amin'ny fikarakarana ny vatana vaovao dia nanoratra tamiko raha toa ka i Beto O'Rourke, mpanao politika Texas ao amin'ny Antoko Demokratika, dia mety ho iray amin'ireo Kennedys ara-politika, filoha John F. Kennedy na Jeneraly Jeneraly Robert F. Kennedy.
Tamin'izany fotoana izany, tsy fantatro hoe iza i Beto O'Rourke, na dia fotoana fohy taorian'izay aza dia nahatsikaritra fa teo amin'ny vaovao nasionaly izy, fony izy nihazakazaka ho an'ny seza Amerikana Amerikana Texas iray nanohitra ny Senate Amerikana Ted Cruz. Nianarako fa i O'Rourke dia mpikambana 3 izay nantsoina hoe Texas US Congressman izay teraka tao amin'ny fianakaviana iray mavitrika ara-politika tany El Paso, Texas.
Nanamarika aho fa ny vatan'i Beto dia nitovy bebe kokoa tamin'i Robert F. Kennedy ho an'i John F. Kennedy. Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo.
Beto O'Rourke amin'ny maha-teraka ao amin'ny vatana vaovao an'i Robert F. Kennedy
Tao anatin'ny fivoriana iray niarahako tamin'i Kevin Ryerson, fampahalalam-baovao mahazatra iray izay mandefa mpitari-dalana amin'ny fanahy antsoina hoe Ahtun Re, izay naneho ny fahaiza-manaon'ireo mari-pahaizana momba ny fiainana tamin'ny fomba tena marina, dia nanamafy i Ahtun Re fa ny Beto O'Rourke no vovoka indray vao teraka an'i Robert F. Kennedy.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endriky ny endriky ny endrik'i Robert F. Kennedy sy Beto O'Rourke dia mitovy.
Ny fiainana taloha talenta: Beto O'Rourke sy Robert F. Kennedy dia nanolotra fanomezana ho mpanao politika.
Ny fanamboarana ny vatana vaovao sy ny planeta: Ian Stevenson, MD ny Oniversiten'i Virginia dia nanangona ireo tranga adim-piainan'ny 1500 tamin'ny taonan'ny androm-piainana nandritra ny androm-piainana izay nekena ho fanekena. Ireo tranga ireo dia mampiseho fa ny fanahy dia manomana fiainana.
Ho ohatra iray ohatra, i Stevenson dia nanangona trangan-jatony 31, ahitana olona roa 62, ary ny 100 isan-jaton'ireo tranga ireo, ireo kambana dia nanana fifandraisana naharitra teo amin'ny fiainana. Raha te hianatra bebe kokoa, azafady mankany:
Ian Stevenson, MD Study Study Twin Reincarnation
Tahaka ny anirian'ny fanahy hamolavola fiainana lava hiainana indray amin'ny fiainam-pianakaviana taloha, ny fanahy dia afaka manomana fiainana ho lasa nofo ao anatin'ireo fianakaviana izay hanampy amin'ny fanatanterahana tanjona amin'ny fanahy. Raha maniry ny hanana asa ara-politika ny fanahy iray, dia afaka manao fifanekena amin'ny famerenana amin'ny laoniny ho lasa fianakaviana ara-politika ny fanahy.
Izany no zava-nitranga tamin'ny dinastika politika an'ny fianakavian'i John Adams, ny fianakavian'i Kennedy, ny fianakaviana Bush ary mety ho hita miharihary izany amin'ny raharaha fanambadiana ao amin'ny Beto O'Rourke.
Mba hamerenana ireo tranga hafa momba ny fanambadiana any an-tokantrano mifandray amin'ireo mpanao politika, anisan'izany i Donald Trump, mankanesa any:
Politika sy lalàna momba ny fiainana teo aloha